Sidee loo daaweeyaa cudurka Iskitsoofiriiniya?
Author Topic: Sidee loo daaweeyaa cudurka Iskitsoofiriiniya? (Read 19080 times)
« on: April 07, 2008, 02:54:22 AM »
Daaweynta daawo la isticmaalayo
Dadka qaba iskitsoofiriiniya intoobada badan waxaa loo qoraa daawooyin, kuwaasoo la doonayo inay yareeyaan calaamadaha togan.
Daawooyinka loo isticmaalo iskitsoofiriiniya waa ‘antipsychotics’ ama’ neuroleptics’ (dajiyeyaal (tranquillizers) waaweyn).
Labada kooxood ee ugu waaweyn daawooyinka ‘antipsychotics’ waa ‘antipsychotics’ caadi ah iyo ‘antipsychotics’ aan caadi ahayn. Daawooyinka ‘antipsychotics’ waxtarkoodu waxa uu qaadan karaa bil ilaa saddex bilood. Daawooyinka ‘antipsychotics’ ee caadiga ah waxaa loo qaataa kiniini am sharoobo ahaan. Qaarkood waxaa la heli karaa iyagoo ah mudis shaqeysa muddo dheer.
Daawooyinka ‘antipsychotics’ waxay yeellan karaan tiro ah waxyeellooyin. Waxay kuwaasi noqon karaan kuwo xun. Kuwa ugu daran waxaa ka mid ah dubaaxin muruq, dhaqdhaqaaq muruq oo aan caadi ahayn iyo dhaqdhaqaaq jir oo aan caadi ahayn iyo cilado dhaqdhaqaaq oo daran. Waxyeellooyinka daawooyinka ‘antipsychotics’ aan caadiga ahayni way ka khafiifsan yihiin kuwa daawooyina ‘antipsychotics’ ee caadiga ah, laakiin waxay ka qaalisan yihiin.
Daaweynta aan daawo la isticmaalin
Waxaa laga yaabaa in daaweynta hadalka ah sida la-talinta iyo fikrad-ku-daaweynta (psychotherapy) ay waxtar u leedahay dadka qaba iskitsoofiriiniya iyo qoysaskooda.
Daaweyntaa hadalka ah waxaa la isticmaalaa iyadoo uu barbar socdo daaweynta daawo la isticmaalayo marka qofku qabo iskitsoofiriiniya.
Daaweynta la isticmaalo garaadka iyo dhaqanka (Cognitive behavioural therapy) (CBT) ayaa si guul leh loogu isticmaalay calaamadaha
iskitsoofiriiniya sida dhaleenteedka ama isku-sawiridda.
Waxaa jira xoogaa ah marag-kac tilmaamaya in daaweynta beddelaad ah sida jimicsiga, fanka/ku-daaweynta muusigga, beddelida cuntada/nafaqada, daaweynta cudur-matalaadda ah ‘homeopathy’ iyo dhirta ayaa la arkay inay dadka qaba iskitsoofiriiniya qaarkood ay
faa’iido ka helaan.
Marmarka qaarkood, dadka heerka cudurkoodu daran yahay waxaa laga yaaba inay u baahan karaan in la dhigo cisbitaalka iyadoo la isticmaalayo Xeerka Caafimaadka Maskaxda (Mental Health Act) si loo qiimeeyo iyo/ama loo daaweeyo oggalaansho la’aan.
Taa waxaa la yiraahda qodob la-beegsi (sectioning). Marrar badan waxaa dhacda in dadka qaba iskitsoofiriiniya ay iyaga laftoodu is keenaan cisbitaalka haddii ay lagamamaarmaan tahay, hase yeeshe dadka qaba iskitsoofiriiniya intooda badani waxay ku dhex nool yihiin beesha qaar badanina waxaa kaliya ee ay arkaan dhakhtarkooda marka ay u baahan yihiin daawo.
Dad badan oo qaba iskitsoofiriiniya ayaa iminka sita Kaarar Qalalaase (Crisis Cards) ama waxay sii sameystaan Dardaaran Hormaris ah (Advance Directives) si ay u sheegaan rabitaankooda daaweyn haddii la dhigo cisbitaalka.
Dhib-kororka ugu waaweyni waxa uu qabsadaa tayada nolosha:
• Cudur waali oo darani waa waayo cabsi leh – isku-sawiridda iyo dhalanteedku waxay si buuxda ugu eeg yihiin run marka ay qofka hayaan.
• Hawlaha bulsheed ee qofka, sida xiriirka uu la leeyahay dadka kale, awoodda shaqeynta iyo maamulidda nolol maalmeedka, ayaa badanaa si culus waxyeelo u gaaraa.
• Is-dilid iyo is-dhaawicid ayaa u caadi ah dadka qaba iskitsoofiriiniya: qiyaastii 10-kiiba mid ayaa ugu dambeyn nafta iska jara.
• Qaar ka mid ah daawooyinka la siiyo dadka qaba iskitsoofiriiniya ayaa keena waxyeelooyin dhib leh sida ciladaha dhaqaaqa, miisaan koror iyo hurdo-hurdo.
Views: 36296 December 10, 2007, 08:31:26 PM
Views: 21055 January 24, 2009, 11:26:50 PM
Views: 12336 May 02, 2011, 06:10:16 PM
Views: 86277 April 21, 2015, 11:16:29 AM
Views: 24684 February 22, 2010, 12:47:32 PM